Waa maxay sagxada miskaha iyo sida loo xoojiyo | Bezzia
Toñy Torres | 13/10/2021 23:55 | Tilmaamaha caafimaadka
Wax badan ayaa laga sheegaa sagxada miskaha marka laga hadlayo haweenka hooyooyinka ah, laakiin wax yar lagama sheego sida ay muhiimka u tahay in la xoojiyo qaybtan jirka. Dhammaan haweenka, iyadoon laga reebin, waa inay ka shaqeeyaan sagxada miskaha xitaa haddii aysan uur lahayn. Sababtoo ah muruqyada aaggan ayaa daciifa waqti ka dib waana sababta ugu weyn ee keenta dhibaatooyinka sida kaadida oo daata.
Sagxada miskuhu waa muruqyada iyo seedaha laga helay qaybta hoose ee godka caloosha. Kuwani waxay leeyihiin shaqo aad muhiim u ah, maadaama ay mas'uul ka yihiin taageeridda xubnaha miskaha, sida kaadi -haysta iyo kaadi -mareenka, siilka, makaanka iyo malawadka. Si xubnahani si fiican ugu shaqeeyaan, waa in lagu hayaa meesha ku habboon tanina waa muruqyada sagxada misigta.
Marka sagxada miskahu daciifto, wax u dhaca sababo kala duwan awgood, wuu ordaa halista silica, oo ay ka mid yihiin, daadinta kaadida, cillad galmo, soo -dhac ama dhabarka oo hooseeya. Markaa aad bay muhiim u tahay in la daryeelo, la ilaaliyo lana xoojiyo sagxada miskaha si aanay taasi u dhicin.
1 Sideen ku ogaanayaa haddii aan qabo sagxada misigta oo daciiftay?
1.1 Sida loo xoojiyo sagxada miskaha
Sideen ku ogaanayaa haddii aan qabo sagxada misigta oo daciiftay?
Haddii aad daciifisay muruqyada misigta iyo seedaha, waxaad ku xanuunsan kartaa calaamado kala duwan sida kaadida oo ku adkaata. Wax aad u dabeecad ah oo si sahlan loo ogaan karo ayaa taas ah ma xakamayn kartid daadinta kaadidaXataa haddii aad qufacdo, booddo ama qoslayso, waxaa laga yaabaa inaad xoogaa dillaacdo, taas oo calaamad cad u ah sagxada misigta oo daciiftay.
Astaamaha kale ee aad ku garan karto dhibaatooyinka sagxada miskaha waa xanuun marka aad galmo sameyneyso, dhabarka hoose ee xanuunka iyo xitaa soo dhac, oo ah barokaca xubnaha ay muruqyadu taageeraan, sida dabada. Astaamahan ayaa ah kuwa ugu daran, markaa waa inaadan u oggolaan in waqtigu dhaafo oo marka calaamadda ugu yar, la tasho dhakhtarkaaga si uu u qiimeeyo xaaladda sagxada miskahaaga.
Sida loo xoojiyo sagxada miskaha
Si loo xoojiyo sagxada miskaha, dhowr nooc oo daaweyn ah ayaa la isticmaali karaa. Ikhtiyaarka koowaad haddii aad la il daran tahay dhibaato aad u daran ayaa ah in lagugu daaweeyo fiisiyoteraj khaas ah arrintan. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad dhaawac kale soo gaarto adigoo isku dayaya inaad adigu xalliso dhibaatada. Xaaladaha ugu khafiifsan iyo xitaa sida ka -hortagga, waxaa jira beddello sida kuwa soo socda.
Layli Kegel: Jimicsiyada noocaan ah waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan muruqyada sagxada misigta, si ay u xoojiyaan sida muruqyada kale ee jirka loo shaqeeyo. Loogu talagalay jimicsiyada Kegel qalabka sida kubadaha Shiinaha ama jimicsiga waa la isticmaali karaa Kegel. Jimicsiyadaan waxaad ku dhawaaqi kartaa muruqyadaada oo aad hagaajin kartaa shaqada sagxada misigta.
Yoga: qaar ka mid ah meelaha yoga ama asanas ayaa ku habboon inay ka shaqeeyaan sagxada miskaha. La tasho khabiir si aad u hesho laylisyada ugu fiican ee kiiskaaga gaarka ah. Tan iyo markii la shaqeynayay sagxada miskaha haddii aan la dhaawacin waxay noqon kartaa mid aan waxtar lahayn.
Jimicsiga saameynta hoose leh: qof kasta oo aan u jeedin saamaynta jidhka, oo aan ku jirin boodbood, ama dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah. Isboortiga ugu fiican dumarka kiiskan waa dabaasha, baaskiil wadista, socodka, ama fuushanka elliptical -ka.
Waxa kale oo aad muhiim u ah in la tixgeliyo tallaabooyinka ka -hortagga qaarkood. Sida loo ilaaliyo miisaanka jirka oo wanaagsan, si joogto ah u samee jimicsiga jirka, leeyihiin caadooyinka musqusha oo wanaagsan, cun cunto hodan ku ah fiber si aad u hesho marin saxan oo sax ah
Waxaa jira arrimo halis ah oo daciifin kara sagxada misigta, sida dhalmada dabiiciga ah, uurka, buurnida, ku-dhaqanka isboortiga saamaynta weyn leh, calool-fadhi joogto ah, cudurrada neef-mareenka ama qalliin lagu sameeyo ama daaweynta dumarka. Ka-hortagga ayaa ah aaladda ugu fiican ee looga hortago dhibaato keeni karta carqalad maalinle ah. La tasho dhakhtarkaaga oo raadso dariiqa ugu fiican ee wax looga qaban karo dhibaatadan ka hor inta aanay noqon mid aad u daran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Tilmaamaha caafimaadka » Waa maxay sagxada miskahu iyo sida loo xoojiyo